World Evangelist Reinhard Bonnke afa | Apg29
Mamiriyoni akashanyira misangano ake uye vanhu vakanga atoponeswa.
vanhu vazhinji vakaponeswa mushure mharidzo yake obva akanyengetera vanorwara. Ipapo paanodzoka mukadzi ari muwiricheya akaisa ruoko rwake tumafuta pahuma yake uye kufamba naye ipapo, uye akatanga kufamba.
Reinhard Bonnke aiva nyika iri muvhangeri wechiKristu uye muparidzi. Akatanga basa rake chouparidzi muna 1970 uye aiva misangano mutende guru. Gare gare, apo misangano vacho vakakura akazotamira panze pamusoro guru munda. In Nigeria akashanyira mamiriyoni misangano ake.
Reinhard Bonnke aiva nemakore 79 okuberekwa. The mufananidzo kumusoro kubva 2014 uye hunobviswa Wikipedia.
Vanhu vakanga atoponeswa
Ndanzwa Reinhard Bonnke kuparidza nguva shoma uye nguva dzose akamuka vanhu vaponeswe. Zvinofungidzirwa kuti kusvika mamiriyoni 75 vakagamuchira Jesu Kristu uye akaponeswa vake wokuvhangera!
Akaparidza ari mukuru kumutsidzirwa danidziro munyika, uye akashanda kwemakore 60 sezvo muvhangeri. Kakawanda uyewo akashanyira bonke Sweden. Uyewo pano vakanga vanhu vakaponeswa kuburikidza noushumiri hwake.
Makore akawanda apfuura apo ndakaenda Bible School Pendekosti muchechi Jönköping Pentecostal takaenda pamusoro kirasi rwendo wokuEastern Europe, asi befu yedu bhazi rwendo guta yokuHannover ari wepanguva West Germany uye akateerera Reinhard Bonnke chipatapata dziite.
vanhu vazhinji vakaponeswa mushure mharidzo yake obva akanyengetera vanorwara. Ipapo ndakaona mumwe mukadzi agere ari pawiricheya. Akaisa maoko ake pamusoro paavo vakanga vasvika, saka kunyange mukadzi ari muwiricheya uye ipapo akaenda. Ndakatarisa nokungwarira chaizvo kuona kana chinhu chakaitika. Asi hapana zvichiitika.
Ipapo paanodzoka mukadzi ari muwiricheya akaisa ruoko rwake tumafuta pahuma yake uye kufamba naye ipapo, uye akatanga kufamba. Taiva parwendo vainyatsoziva vakashamiswa uye vaisagona kuzvitenda meso edu. Handizivi kuti chii chakanga chakakanganisika naye, asi ndinoziva akasimuka akaenda.
Yakahwina mamiriyoni Jesu Kristu
Mutungamiri Swedish Pentecostal Daniel Alm achinyorera Twitter :
"Reinhard Bonnke yakahwina mamiriyoni kuti Kristu. Ndaionga iye kwazvo. Aiva dzekare muparidzi yemweya. Ndinorangarira pandakaverenga akamunzwa muBerlin, Sweden uye sezvo ava 2018 muna Helsinki. Rest norugare, Va" i remarara Evangelist! " .
Nhasi, muvhangeri Reinhard Bonnke musha Jesu pashure kuita muvhangeri rake chiito zvakanaka!